Dejero သည်ဥရောပရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်အသစ်များအားကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dejero သည်ဥရောပရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်အသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
အိုင်ယာလန်၊ ဟန်ဂေရီနှင့်ပေါ်တူဂီမှရုပ်သံလိုင်းအသစ်များအားဖြည့်သည် Dejeroဒေသတွင်းစျေးကွက်များအပေါ်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုနှင့် ၀ ယ်ယူသူများအတွက်မြေပြင်အခြေစိုက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအားပေးသည်
Waterloo, အွန်, သြဂုတ်လ 5, 2020 - Dejero အိုင်ယာလန်၊ ဟန်ဂေရီနှင့်ပေါ်တူဂီစသည့်ဥရောပမိတ်ဖက်နိုင်ငံများသို့ယူဆောင်လာပြီးစျေးကွက်တည်ရှိမှုနှင့်ဒေသတွင်းပံ့ပိုးမှုများကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဒေသတွင်းရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်များ၏တိုးချဲ့ကွန်ယက်ကို enable ပါလိမ့်မယ် Dejero မစ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များကိုဥရောပအသံလွှင့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ရန်အတွက်၎င်း၏အဖြေများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝပေးအပ်ရန်။
“ ဥရောပစျေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှပထ ၀ ီအနေအထားအရရော၊ ဒေါင်လိုက်စျေးကွက်တွေမှာပါဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းတွေအတွက် ၀ ယ်လိုအားတွေတိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ DejeroEMEA အတွက်အရောင်းဒါရိုက်တာ။ ဤမိတ်ဖက်အသစ်များသည်ဒေသတွင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောကိုယ်စားပြုမှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဥရောပဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကိုသက်သေပြနိုင်သည်။
အပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုထည့်သွင်းဖို့လတ်တလောဥရောပရောင်းသူ Dejero ပေါ်တူဂီတွင် Pantalha၊ ဟန်ဂေရီရှိ Rexfilm၊ အိုင်ယာလန်ရှိ Creative Technology (CT) နှင့်ဂရိရှိ INA TV တို့ပါဝင်သည်။ မိတ်ဖက်အားလုံးသည် EnGo မိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်စက်၊ CuePoint ပြန်လာသည့်ဗွီဒီယိုဆာဗာ၊ GateWay ကွန်ယက်ပေါင်းစည်းမှုကိရိယာ၊ WayPoint လက်ခံ၊ PathWay encoder၊ FlexPoint transceiver စသည့်အထင်ကရထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ နှင့်မကြာသေးမီက COVID-19 ကူးစက်မှုကာလအတွင်းထုတ်လွှင့်သူများစွာအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော LivePlus mobile app ကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက်များ။
ဤအသစ်မိတ်ဖက်များပူးပေါင်း Dejeroသြစတြီးယားရှိ AV-Professional၊ ပိုလန်ရှိ DTS ဒေတာပေးပို့စနစ်များ၊ အီတလီနိုင်ငံမှ Nexting၊ စပိန်မှ Ontario Soluciones၊ ရုရှားရှိ SHBP၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ Tevios နှင့်ခရိုအေးရှားရှိ CS Computer Systems တို့ပါဝင်သည်။
"Dejero အထူးသဖြင့် bandwidth အကန့်အသတ်ရှိသည့်နေရာတွင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမကြာခဏရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုပေးသည်။ Pantalha မှအထွေထွေမန်နေဂျာBonifácio Ribeiro ကပြောသည်။ ဥပမာ EnGo mobile transmitter ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်၊ Dejero ကင်မရာအော်ပရေတာများသို့မဟုတ်အမှုထမ်းများသည်ဒေသတွင်းမှတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ SIM မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကိုလွယ်ကူစွာလဲလှယ်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဒေသတွင်းမိုဘိုင်းကွန်ယက်များအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ဘာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့နားလည်အောင်သူတို့နဲ့ငါတို့ဖောက်သည်တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ”
ရန်ကျောရိုး Dejeroဖြေရှင်းနည်းများမှာမူပိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် Smart Blending Technology ဖြစ်ပြီးအရင်းအမြစ်မျိုးစုံမှအမျိုးမျိုးသောကြိုးနှင့်ကြိုးမဲ့ IP ဆက်သွယ်မှုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းစုစည်းပေးသော virtual network များဖွဲ့စည်းရန်၊ ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊
၏ပေါင်းစပ် DejeroSmart Blending Technology နှင့် Hybrid Encoding နည်းပညာတို့သည်ကွန်ယက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုအမြင့်ဆုံးထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ဤနည်းပညာများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မီဒီယာအဖွဲ့များအနေဖြင့်အခက်ခဲဆုံး bandwidth-constrained အခြေအနေများတွင်ပင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် latency နိမ့်ကျပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုအထောက်အကူပြုဇာတ်လမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရေကညွှန်ပြသည် DejeroEnGo တွင်တွေ့ရသော Hybrid Encoding Technology အင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုတည်းသောထူးခြားသည့် Complexity Analyzer သည်ဥရောပဖောက်သည်များနှင့်လူကြိုက်များကြောင်းသက်သေပြနိုင်လိမ့်မည်။ လူတစ်ယောက်လုပ်နိုင်တာထက် settings တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပြောင်းလဲတာတွေလုပ်နိုင်တာထက်အများကြီးပိုမြန်တယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကကွန်ရက်အခြေအနေတွေမှာရုပ်ပုံကြည်လင်မှုကိုအမှန်တကယ်ပိုကောင်းစေတယ်။ ကင်မရာအော်ပရေတာများသည်ပြောနေဆဲရိုက်ချက်မှအမြင့်မားသောရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှုရိုက်ချက်သို့ချောမွေ့စွာနှင့်အလိုအလျောက်ကူးပြောင်းနိုင်ပြီးရရှိနိုင်သည့် bandwidth အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုရရှိနိုင်သည်။
Dejeroလက်တွဲဖော်အသစ်များလည်းဝင်ရောက်ခွင့်ရလိမ့်မည် Dejeroနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်တီထွင်မှုများဖြစ်သော WayPoint 50 နှင့် CuePoint 50. ဤသေးငယ်သော form factor ထုတ်ကုန်သစ်များ၊ လက်ခံသူနှင့်ပြန်လာသည့် video / teleprompter server တို့သည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအခြေအနေများအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခြေအနေတွင်ဘူတာကိုစောင့်ရှောက်ရန် COVID-19 အကျပ်အတည်းကဲ့သို့သောကူးစက်ရောဂါများကြောင့်ရေကြီးခြင်း၊ ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများသို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးများအတွင်းလေထု။ ၎င်း၏ဥရောပမိတ်ဖက်များမှတဆင့် Dejero ဖောက်သည်များ၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များအတွက်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ရန်ကူညီသည်
ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုဘယ်နေရာမှာမဆို၎င်း၏ရူပါရုံကိုမောင်းနှင်, Dejero cloud computing, အွန်လိုင်းပူးပေါင်းနှင့်ဗီဒီယိုနှင့်အချက်အလက်များ၏လုံခြုံလဲလှယ်မှုအတွက်လိုအပ်သည့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အားကိုးဆက်သွယ်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါမျိုးစုံကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရောက်ပြီး။ ယင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ, Dejero အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများ, ဆော့ဖ်ဝဲ, ဆက်သွယ်မှုန်ဆောင်မှုများ, Cloud န်ဆောင်မှုများဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုမှအရေးပါသည့်င့်နေချိန်နှင့် bandwidth ကိုပေးထောက်ခံပါတယ်။ Waterloo, အွန်, ကနေဒါ, ရုံးချုပ် Dejero ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက high-bandwidth ကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.dejero.com.
သြဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလများအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများ @DejeroLabs ကို ဖြတ်၍ လိုက်နာပါ။ #မိတ်ဖက်။
Dejero သည် KNSD-TV နှင့် KUAN-LD ၏ Mobile Broadcast Truck ကို Mobile TV Station အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည် - စက်တင်ဘာလ 16, 2020
ယူရိုမီဒီယာအုပ်စုသည်ထူးခြားသောအကြီးစား modular Live ထုတ်လုပ်မှုဗိသုကာပညာအတွက် Selenio ကွန်ယက်ပရိုဆက်ဆာကိုစံသတ်မှတ်သည် - စက်တင်ဘာလ 9, 2020
Argosy သည် Boston Stream + Encoder ကိုအကြီးစား Ultra-Density Video Encoding အတွက် Active Hardware Range ထဲသို့ထည့်သည်။ - သြဂုတ်လ 25, 2020
သြစတြီးယား AV-Professional ဘယ်လ်ဂျီယမ် Bonifacio Ribeiro အသံလွှင်း channel မိတ်ဖက်များ ကတိကဝတ် ကို Creative နည်းပညာ ခရိုအေးရှား CS ကွန်ပျူတာစနစ်များ CT ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု Dejero DTS ဒေတာပေးပို့စနစ်များ ဥရောပ ဂရိနိုင်ငံ ဟန်ဂေရီ စပ် encoding ကနည်းပညာ INA တီဗီ အိုင်ယာလန် အီတလီ တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယို မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ မစ်ရှင်ဝေဖန် MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Next အွန် Soluciones ပန်တလီ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှု Rexfilm ရော့ရေ ရုရှားနိုင်ငံ SHBP စမတ် Blending နည်းပညာ စပိန် Tevios 2020-08-05
ယခင်: MediaKind သည်လိုအပ်သည့် OTT နှင့် IPTV ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုလျင်မြန်စွာပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် Aquila On-Demand ဖြေရှင်းချက်ကိုစတင်ခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: New York Alliance (PNYA) Post-COVID ကမ္ဘာတွင် Post-Production ထုတ်လုပ်မှုကိုစစ်ဆေးရန်